को हुन नेपालबाट सोमालियाका अतिवादी समूहमा पुगेका हमदान ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार को हुन नेपालबाट सोमालियाका अतिवादी समूहमा पुगेका हमदान ?
को हुन नेपालबाट सोमालियाका अतिवादी समूहमा पुगेका हमदान ?
२०७७, १४ असार आईतवार १७:५२
सोमालियाका सुरक्षा फौजले मुस्लिम अतिवादी समूह अलसबाबका कमाण्डरलाई मारेका छन्। त्यहाँको राष्ट्रिय रेडियोले बिहीबार भएको कारबाहीका क्रममा अल सबाबका लडाकुलाई तालिम दिने असरफ आज्मी अबु हामदान मारिएको बताएको छ।
सरकारी रेडियोका अनुसार मारिएका हमदान नेपालबाट गएका हुन्। उनी उक्त इस्लामिस्ट समूहका बरिष्ठ प्रशिक्षक थिए। हमदानको मृत्युको समाचार बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले पनि लेखेको छ।
रोयटर्सको सोही समाचारलाई अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले पनि आफ्नो अनलाइनमा छापेको छ। हमदान दक्षिण सोमालियाको मध्य जुबा क्षेत्रमा मारिएका हुन्। उक्त कारबाहीमा उनीसँगै अरू तीन लडाकु पनि मारिएका छन्। सोमालियाको केन्द्रिय सरकारलाई हटाएर आफ्नै मुस्लिम सरिया कानुनसहितको शासन स्थापना गर्न अलसबाब सन् २००८ देखि युद्धमा छ।
त्यति टाढाको युद्धमा सहभागी हुन नेपालका हामदान कसरी पुगे भन्नेबारे केही खुलेको छैन। यो विषयले अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यममा प्राथमिकता पाएको छ । नेपाली समुदायबाट सोमालियामा सहभागी हुन गएका को हुन भन्ने विषयमा नेपाली सुरक्षा निकायले भने अनविज्ञता प्रकट गरेको छ ।
Previous articleनेपालमा थपिए ४६३ कोरोना संक्रमित, कूल संख्या १२,७७२
Next articleचारदिनपछि दाना सबस्टेशनको ताला खुल्यो